အိုမီခရွန်ကူးစက်မှု မြင့်တက်လာချိန်တွင် ထိုင်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက သတိပေးချက်ထုတ်ပြန် - Xinhua News Agency
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့၌ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးရန် စာရင်းပေးနေသူများအား ၂၀၂၁ ခုနှစ် ၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက် တွင် တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဘန်ကောက်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၈ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ထိုင်းနိုင်ငံ၌ COVID-19 ဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ် အိုမီခရွန် (Omicron) ကူးစက်ခံရသူ ၅၁၄ ဦးအား တွေ့ရှိပြီးနောက် နိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင် အဆင့် ၃ သတိပေးချက်ကို ထိုင်းနိင်ငံကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
တင်းကျပ်သော အဆင့် ၃ သတိပေးချက်တွင် COVID-19 ကင်းစင်သည့် ဝန်းကျင်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက် ပြည်သူများအား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိရန်တိုက်တွန်းထားပြီး ခရီးမသွားမီနှင့် ခရီးသွားအပြီးတွင်ကိုဗစ် အမြန်စစ်ဆေးခြင်းကိရိယာ (AKT)ဖြင့် စစ်ဆေးခြင်း၊ လူစုလူဝေးကို ရှောင်ရှားရန်နှင့် ဖြစ်နိုင်ပါက အလုပ်အား အိမ်မှသာ လုပ်ရန် တိုက်တွန်းထားသည်။
အဆိုပါသတိပေးချက်သည် အားလပ်ရက်ရာသီအပြီးတွင် လူများသွားလာလှုပ်ရှားနိုင်မှု မြင့်မားလာနိုင်ခြင်းကြောင့် ရောဂါကူးစက်မှုအသစ်များ မြင့်တက်လာနိုင်သည့်အတွက် စိုးရိမ်မှုများ မြင့်တက်လာခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ ထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Opas Karkawinpong က ပြောကြားခဲ့သည်။
အိုမီခရွန်ဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ်သည် အလွယ်တကူ မြင့်တက်လာနိုင်ပြီး မကြာမီ Deltaဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ်အား ကျော်လွန်သွားနိုင်ကြောင်း Opas မှ ထပ်မံမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် သတိပေးချက်အဆင့်ငါးဆင့်ရှိပြီး ပဉ္စမအချက်မှာ ညမထွက်ရအမိန့်နှင့် တင်းကျပ်သောခရီးသွားလာမှုနှင့် ခရီးသွားများအားလုံးအတွက် လူစုလူဝေးထိန်းချုပ်ရေးနှင့် quarantine အစီအစဉ်ကို ရည်ညွှန်းကြောင်း သိရသည်။
အာဏာပိုင်များ၏အဆိုအရ အိုမီခရွန်ဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသည့်အရေအတွက်သည် ပြီးခဲ့သော ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်တွင် ၁၀၄ ဦးရှိခဲ့ရာ မှလက်ရှိတွင် ၅၁၄ ဦးအထိ အထိငါးဆတိုးလာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ လက်ရှိတွင် ဆေရုံတက်ရောက်မှုနှုန်း ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းအောက် နည်းပါးနေသေးရာ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် နိုင်ငံ၏ အခြေအနေကို ကိုင်တွယ်ရန် ဆေးရုံကုတင် လုံလောက်စွာ ရှိသည်ဟု ယုံကြည်ထားဆဲ ဖြစ်သည်။ (Xinhua)
Thai health ministry issues warning amid Omicron cases surge
BANGKOK, Dec. 27 (Xinhua) — Thailand’s Ministry of Public Health on Monday issuedalevel3warning all over the country after 514 cases of the Omicron variant of COVID-19 have been detected.
The level3warning refers to an urge for public cooperation to implement strict COVID-19 free setting, more antigen rapid test kit (AKT) screening before and after traveling, avoid crowds, as well as issue work-from-home policy if possible.
The warning is based on rising concerns overapossible surge in new cases after the holiday season which has seenahigh level of people mobility, said Opas Karnkawinpong, director-general of the Disease Control Department from the Ministry of Public Health.
Opas further noted that the Omicron variant can easily surge and is expected to take over Delta variant very soon.
There are five warning levels in Thailand, where the fifth one refers to curfew, strict mobility and public gathering control and quarantine scheme for all travelers.
According to the officials, the number of new Omicron cases has soared five-fold, from 104 last Tuesday to currently at 514.
Nevertheless, the Ministry of Public Health is still confident that the country still has sufficient hospital beds to handle the situation, citing its low 10 percent occupancy rate at present. Enditem